Inguqulelo nganye ibinabalandeli bayo abathi, xa besetyenziswa, baguqule imizi-mveliso eyahlukeneyo. I-PC yatshintsha indlela esiphatha ngayo amaxwebhu angokwenyama, i-CAD yathumela iibhodi zokudweba kwiindawo zokugcina iimpahla; I-imeyile ibe yindlela...
Siyakwamkela kwindawo ye-Naviworks, isixhobo sokusebenzisana se-Autodesk, eyenzelwe ukulawulwa kweeprojekthi zokwakha. Xa silawula iiprojekthi zokwakha kunye nezityalo kufuneka sihlele kwaye sihlolisise iintlobo ezininzi zeefayile, siqinisekise...
Kule khosi siza kugxila ekukhupheni izixa ngokuthe ngqo kwiimodeli zethu ze-BIM. Siza kuxoxa ngeendlela ezahlukeneyo zokukhupha izixa usebenzisa iRevit kunye neNaviswork. Ukutsalwa kwezibalo zemetric ngumsebenzi obalulekileyo oxutywa kwizigaba ezahlukeneyo zeprojekthi…
I-BIM Computational Design Le khosi ngumhlobo, isikhokelo esiyintshayelelo kwihlabathi loyilo lokudibanisa usebenzisa i-Dynamo, iqonga elivulekileyo lenkqubo ebonwayo yabaqulunqi. Iyaqhubeka iphuhliswa ngeeprojekthi apho...
Yonke into okufuneka uyazi malunga neRevit ukwenza iiprojekthi zezakhiwo Kule khosi siza kugxila ekukunikeni ezona ndlela zibalaseleyo zokusebenza ukuze ube nolwazi lweRevit izixhobo zokwakha imodeli kwinqanaba…
Kule khosi ihambele phambili ndikubonisa inyathelo ngenyathelo indlela yokuphumeza indlela ye-BIM kwiiprojekthi nakwimibutho. Kubandakanya iimodyuli zokuziqhelanisa apho uya kusebenza kwiiprojekthi zokwenyani usebenzisa iinkqubo ze-Autodesk ukwenza iimodeli eziluncedo ngokwenene, ukwenza ukulinganisa kwe4D,...